ချီလီစာရေးဆရာများနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအက္ခရာများတွင်ပါ ၀ င်မှု | လက်ရှိစာပေ
Juan Ortiz | 27/04/2021 17:45 | အဆင့်မြှင့်တင် 27/04/2021 20:01 | အတ္ထုပ္ပတ္တိ, စာရေးဆရာများ, စာပေ၏သမိုင်း
Gabriela Mistral ၏ကဗျာတွင် Metonymy ။
မျက်မှောက်ခေတ်ချီလီစာရေးဆရာများသည်ကမ္ဘာ့စာပေများတွင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအမှတ်အသားကိုထားရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း၌ဤလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံသည်နိုင်ငံတကာတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးကြီးကျယ်သောစာရေးဆရာများမွေးဖွားလာသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများသည် Gabriela Mistral နှင့် Pablo Neruda တို့ရရှိခဲ့သောဂုဏ်အသရေရှိသောအရေးကြီးသောဆုများရရှိခဲ့ကြသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောစာပေအမျိုးအစားများမှတဆင့်, ဤစာရေးဆရာများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသန်းနှင့်ချီသောစာဖတ်သူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကဲ့သို့အလုပ်ဖြစ်တယ်: ရိုင်းစုံထောက် (Roberto Bolaño) နှင့် အချစ်ကဗျာနှစ်ဆယ်နဲ့အပူတပြင်းသီချင်း (ပါဘလို Neruda) သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့အမွေအနှစ်ရဲ့ repertoire ရဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲ။ ထို့နောက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ချီလီစာရေးဆရာများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည့်အပိုင်းကိုပြသပါလိမ့်မည်။
2 ပါပလော Neruda
Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga ကို ၁၈၈၉ ခုနှစ်Aprilပြီလ ၇ ရက်တွင်ချီလီနိုင်ငံ၊ ဗစ်ကူနာတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်စပိန်နှင့် Basque ဘာသာစကားတို့မှဆင်းသက်လာသောနှိမ့်ချသောမိသားစုမှဖြစ်သည်။ သူ၏ကလေးဘဝကို Elqui ပြည်နယ်ရှိနေရာအမျိုးမျိုးတွင်သုံးစွဲခဲ့သည်Montegrande သည်သူ၏မွေးရပ်မြေကိုစဉ်းစားခဲ့သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာသင်ကြားမှုမရှိသော်လည်း ၁၉၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ သူသည်ဆရာမအဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး Escuela de la Compañía Baja၊ ထို့နောက် La Cantera နှင့် Los Cerritos တို့တွင်ဖြစ်သည်။. ၁၉၁၀ တွင်သူ၏အသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုစန်တီယာဂိုရှိပုံမှန်ကျောင်းအမှတ် ၁ ကအတည်ပြုခဲ့သည်သူမပြည်နယ်ပါမောက္ခ၏ခေါင်းစဉ်ကိုလက်ခံရရှိရှိရာ။
သူသည်သူ၏သင်ကြားရေးအလုပ်များနှင့်အတူသတင်းစာများအတွက်ရေးသားခဲ့သည် အဆိုပါ Coquimbo နှင့် Elqui ၏အသံ Vicuña၏။ ၁၉၀၈ တွင်သူသည်ကလောင်အမည်ကိုမွေးစားခဲ့သည် Gabriela Mistral, "အတိတ်" ဟူသောကဗျာတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း. သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးသိသာထင်ရှားသောအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အတူလာ၏ သေမင်း၏ Sonnets, နှင့်အတူချီလီစာရေးဆရာပန်းအားကစားပြိုင်ပွဲ (1914) ၏ဆုရရှိခဲ့သည်။
၎င်း၏လမ်းကြောင်းအတွက်, Mistral သည်ရာပေါင်းများစွာသောကဗျာများကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်: လူဆိတ်ညံရာ (1922), Tala (1938) နှင့် ဂွမ် (1954) ။ ထိုနည်းတူစွာပင်စာရေးသူသည်အရေးအကြီးဆုံးဆုများဖြစ်သောစာပေဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆု (၁၉၄၅) နှင့်ချီလီစာပေဆိုင်ရာအမျိုးသားဆု (၁၉၅၁) တို့နှင့်ထင်ရှားခဲ့သည်။ Mistral သည်နယူးယောက်၌ပန်ကရိယကင်ဆာကြောင့် ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင်သေဆုံးခဲ့သည်။
Ricardo EliécerNeftalí Reyes Basoalto သည် ၁၉၀၄၊ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင်ဤကမ္ဘာသို့ရောက်ရှိလာသည်။ သူ၏ဇာတိမြို့မှာချီလီ၊ Maule ဒေသရှိ Parral ဖြစ်သည်။ သူသည်José del Carmen Reyes Morales နှင့် Rosa Neftalí Basoalto Opazo တို့၏သားဖြစ်သည်။ သူ၏မိခင်ကကဗျာဆရာမွေးဖွားပြီးနောက်တစ်လအကြာတွင်တီဘီရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ပါပလော Neruda —————————————————————————————————— သူသည် Temuco တွင်ငယ်စဉ်ကတည်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အထိနေထိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒီမြို့မှာသူပထမဆုံးလေ့လာခဲ့တယ် နှင့်ဤနောက်ပိုင်းတွင်, သူ့ကဗြာဆနျအကျင့်ကိုကျင့်အများအပြားများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်၏ပထမဆုံးဆောင်းပါး၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဇွဲရှိခြင်း (1917), သတင်းစာထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် Temuco ၏နံနက်။ နှစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်သူသည်ကဗျာဆရာ Gabriela Mistral နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူသည်စာဖတ်ခြင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးသူသည်ကျော်ကြားသောရုရှားစာရေးဆရာများ၏လက်ရာများဖြင့်အာဟာရဖြည့်တင်းရန်အားပေးခဲ့သည်။ ၁၉၂၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပါဘလို Neruda အဖြစ်သူ၏လက်ရာများကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသူ၏တရားဝင်အမည်အဖြစ် ၁၉၄၆ တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။
၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင်သူသည်ထင်ရှားကျော်ကြားသောကဗျာများကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အချစ်ကဗျာနှစ်ဆယ်နဲ့အပူတပြင်းသီချင်း။ ထိုအရပ်မှ သူသည်အသက်ရှင်စဉ်နှင့်သေဆုံးပြီးနောက်အသက် (၂၀) ​​ကျော်တွင်အလုပ်ပေါင်း (၄၀) ကျော်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ သူ၏အလုပ်တွင် Neruda ကိုအကြိမ်များစွာချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့အနက်အောက်ပါထူးခြားချက်များမှာ - ချီလီအမျိုးသားစာပေဆိုင်ရာဆု (၁၉၄၅)၊ လီနင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု (၁၉၆၆) နှင့်နိုဘယ်ဆုအတွက်စာပေ (၁၉၇၁) ။
နီရိုဒါသည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုသုံးကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏တစ် ဦး တည်းသောသမီးမှာပထမ ဦး ဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဖြစ်သော Malva Marina Trinidad ဖြစ်ပြီးမွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်အသက် ၈ နှစ်အရွယ်တွင် hydrocephalus ကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ ပါပလောနီရိုဒါ၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များသည်စန်တီယာဂိုတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၃၊ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်သေဆုံးခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကနေ။
Roberto Bolañoကို ၁၉၅၃ Aprilပြီ ၂၈ တွင်ဆန်တီယာဂိုဒီချီလီ၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏ကလေးဘဝသည်ဗစ်ပါရာယို၊ ဗင်နယာဒီမာနှင့်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့အကြား၌သူ၏မူလတန်းအဆင့်ကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ၁၅ နှစ်အရွယ်တွင်သူသည်မိသားစုနှင့်အတူမက္ကဆီကိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Aztec နိုင်ငံတွင်သူသည်ဒုတိယတန်းပညာဆက်လက်သင်ကြားခဲ့သည်သူသည်စာဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းအတွက်သာမိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံရန်အတွက်တစ်နှစ်အကြာတွင်ထွက်ခွာခဲ့သည်။
မက္ကဆီကိုစီးတီးတွင် Bolañoသည်ကဗျာဆရာ Mario Santiago နှင့်အခြားလူငယ်စာရေးဆရာများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အုပ်စုသည်စာပေအကျိုးစီးပွားများစွာကိုဝေမျှပေးခဲ့သည်၊ ဒီခင်မင်ရင်းနှီးမှုကမှကဗျာဆန်ဆန်လှုပ်ရှားမှုကိုမွေးဖွားခဲ့သည်၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်ရောဘတ်တိုသည်ထိုစာအုပ်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအသစ်တီထွင်ပါ။ ဒီကဗျာစုဆောင်းမှုဟာသူအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးတင်ပြခဲ့တဲ့ခြောက်ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးသေဆုံးပြီးနောက်နှစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေမှုပါ။ သူ၏စာအုပ်များတွင် ရင်ခုန်စရာခွေး (1993), Tres (2000) နှင့် အမည်မသိတက္ကသိုလ် (2007) ။
သူ၏ပထမဆုံးစာအုပ်၊ Morrison တပည့်တစ် ဦး ထံမှ Joyce ပန်ကာမှအကြံဥာဏ် (1984), စာပေ Field ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်. သို့သော်သူ၏ရှည်လျားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဖြစ်သော်လည်းဤစာရေးဆရာအားကျော်ကြားမှုအဖြစ်သို့ရောက်စေသည့်အလုပ်မှာသူ၏ဆဌမထုတ်ဝေမှုဖြစ်သည်။ ရိုင်းစုံထောက် (1998) ။ ဤဝတ္ထုသည်သူ့ကို Herralde de Novela ဆု (၁၉၉၈) တွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ -ကလက်ခံရရှိရန်ပထမ ဦး ဆုံးချီလီ- နှင့်Rómulo Gallegos ဆု (၁၉၉၉) ။
Roberto Bolañoသည်အသည်းနာခြင်းဖြင့်ကာလကြာရှည်စွာခံစားပြီးနောက် ၂၀၀၃၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်၊ ဘာစီလိုနာ (စပိန်) တွင်အသက် ၅၀ တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ချီလီစာရေးဆရာဟာသူသေဆုံးပြီးနှစ်အကြာမှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးကျန်ခဲ့တယ်။ တစ် ဦး ကလက်ရာ, ထိုဝတ္ထုထဲကထွက်လာ၏ 2666 Salambó၊ Ciudad de Barcelona နှင့် Altazor ကဲ့သို့သောအရေးပါသောဆုများရရှိခဲ့သည်.
Alejandra Costamagna Crivell သည် ၁၉၇၀၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ဆန်တီယာဂိုဒီချီလီရှိကမ္ဘာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူမငယ်ငယ်ကတည်းကစာရေးရတာကိုကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အထိအလုပ်ကိုပိုပြီးအလေးအနက်ထားခဲ့တယ်။ သူ၏ဆရာ Guillermo Gómezသည်ဤစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်များစွာပတ်သက်ခဲ့သည်။ သူ၏ဘဝ၏အဆင့်တွင်သူသည် Mistral, Neruda, Shakespeare နှင့် Nicanor Parra တို့ကိုစတင်ဖတ်ရှုခဲ့သည်။ အားလုံးသူမ၏အကြီးအသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ပါပြီ။
Costamagna သည် Diego Portales တက္ကသိုလ်မှသတင်းစာပညာကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အတန်ကြာသော်သူသည်ထိုကျောင်းဝင်းရှိစာပေတွင်မဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်အလုပ်အကိုင်တစ်လျှောက်စာပေအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံခဲ့သည်၊ ထို့အပြင်သူသည်အမျိုးသားမဂ္ဂဇင်းများအတွက်အယ်ဒီတာ၊
စာရေးဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့သူမဟာပထမဆုံးအလုပ်ကို ၁၉၉၆ မှာတင်ပြခဲ့ပြီး၊ တိတ်တဆိတ် မှတ်ချက်များသည်အလွန်ကောင်းသောမှတ်ချက်များကိုရရှိခဲ့ပြီး Gabriela Mistral Literary Games ဆု (၁၉၉၆) ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကော့တမ်ဂျာ အောင်မြင်သောဝတ္ထုများကိုတင်ဆက်ခဲ့သည် - ညအမှောင် (2000), နောက်ဆုံးမီး (2005) နှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ (2011) ။ အများအပြားဝေဖန်သူများကဒါခေါ်တွင်သူ၏လက်ရာအချို့ပါဝင်သည်ပါပြီ ကလေးများ၏စာပေ။
ဆန်တီယာဂိုဒီချီလီသည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင်အဲလ်ဘတ်တိုဖေလီပေဖူဂေးဒီဂူနီနက်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏ကလေးဘဝကိုယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်သုံးစွဲခဲ့ပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ်ရောက်မှသာသူ၏ဇာတိနိုင်ငံသို့ပြန်ခဲ့သည်။ ဘာသာစကားဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောစာရေးဆရာသည်သူ၏မိခင်ဘာသာစကားနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်စာအုပ်များကိုစတင်ဖတ်ရှုခဲ့သည်။ ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည် စာရေးကိရိယာ Marcela Paz ရေးသားခြင်းသည်သူ့အပေါ်များစွာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်၊ ၎င်းကိုသူ၏ပထမဆုံးစာအုပ်တွင်ထင်ဟပ်နိုင်သည်။
သူသည်ချီလီတက္ကသိုလ်၌ပညာသင်ခဲ့သည်။ သူ၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမှာလူမှုဗေဒဆိုင်ရာအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်တစ်နှစ်လေ့လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်စာနယ်ဇင်းပညာကိုပြောင်းလိုက်သည်။ သူသည်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး၊ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာတစ် ဦး အနေနှင့်သူ၏အလုပ်အပြင်စာနယ်ဇင်းသမား၊ ဝတ္ထုရေးဆရာ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကိုလည်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမား။ ၎င်းကိုခေတ်ပြိုင်စာရေးဆရာများအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်၊ ပို၍ မှန်ကန်သောနှင့်မြို့ပြစာပေများတွင်လောင်းကစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ တွင်သူ၏ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းကိုတင်ပြခဲ့သည်, အလွန်အကျွံသုံးစွဲသူသည်စန်တီယာဂိုစာပေအတွက်မြူနီစီပယ်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်. နောက်နှစ်တွင်အောင်မြင်မှုရစေသောဝတ္ထုကိုသူထုတ်ဝေခဲ့သည်။ လှိုင်းကြီး။ သူ၏အလုပ်ကလည်းပေါ်လွင်သည်။ မင်နီ၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာရုပ်ရှင်ရုံအတွက်အဆင်ပြေအောင်ပြထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်။ သုံးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူက semi-autobiography ကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ် ငါ့ဘဝရဲ့ရုပ်ရှင်သူ၏နောက်ဆုံးဝတ္ထုများမှာ ဝတ္ထုမဟုတ် (2015) နှင့် ချွေး (2016) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်ရှိစာပေ » အမျိုးအစားများ » အတ္ထုပ္ပတ္တိ » ခေတ်ပြိုင်ချီလီစာရေးဆရာများ
Julio Cesar Cano ။ စစ်ဆေးရေး Monfort ကိုဖန်တီးသူနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း